MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: ဦးသန်းရွှေရဲ့ တပည့်မွေးဗျူဟာ - အပိုင်း (၂)
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ နောင် ၃ နှစ်ခန့်အကြာ စစ်ရုံးကိုရောက်ရာ သူ့ကို ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းအဖြစ် တပ်ချုပ် ဦးသန်းရွှေရဲ့ ရုံးခန်းဘေးမှာ ခန့်ခန့်ကြီးထိုင်နေတာကို အံ့သြဖွယ်ရာ တွေ့ရပါတော့တယ်။ ရာထူးတက်ပေးထားတာက “အပ်ချလောင်း” ဆိုပြီး မျက်လှည့်ပြသလို ဖြစ်နေတာမို့ပါ။ ကျွန်တော်က “အကိုကြီး မှတ်မိသေးလား! အကိုကြီး စမ်းချောင်း မဝတဥက္ကဌ လုပ်တုန်းက ကျွန်တော် လာခဲ့တာလေ။ အကိုကြီးက လျှိုတယ်ဗျာ၊ ကျွန်တော်က အကိုကြီးကို လိုအပ်တာရှိရင် မှာပါလို့ ပြောခဲ့တာတောင် ရှက်တောင် ရှက်မိသေးတယ်” လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူက “ငါ့ညီရာ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အခု ဘာလုပ်ပေးရအုံးမလဲ” လို့ ဆိုပါသေးတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာ တပ်ချုပ်ဦးသန်းရွှေ တပည့်ရင်း ဖြစ်တာနဲ့အညီ အစွမ်းပြပါတယ်။
ဒုတပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဖြစ်နေတဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးဟာ D.S.A ကျောင်းဆင်းတစ်ဦးပီပီ D.S.A ကျောင်းဆင်းတွေကိုသာ ရွေးချယ် နေရာပေးပါတယ်။ သူဟာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ခန့်က D.S.A ကျောင်းဆင်း တပ်မမှူးတွေကိုသာ ရာထူးတိုး အပေါ်သို့ ဆွဲတင်ခဲ့ရာ O.T.S (43) ကျောင်းဆင်း တပ်မ (၈၈) တပ်မမှူး တစ်ဦးသာ ရာထူးတိုး ပါရှိခဲ့တာကြောင့် အရာရှိလောကအတွင်း ဂယက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာ အဲ့ဒီရာထူးတိုးမှု အစီရင်ခံစာကို ရုံးတွင်းစာ အကျဉ်းချုပ်ပုံစံနဲ့ ဖိုင်တင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူ့ရဲ့မှတ်ချက် ရေးသားရမှု ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ အချွန်နဲ့ “မ” တာမျိုး မရေးသားခဲ့ပေမယ့် ဦးသန်းရွှေ အလုပ်ရှုပ်နေချိန်မှာ ဖိုင်ကို ထိုးတင်ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ဦးသန်းရွှေဟာ စိတ်ရှုပ်အလုပ်ရှုပ်ချိန်ဆိုတော့ အဲဒီရာထူးတိုး အစီရင်ခံစာကို မင်နီဖြင့် ခြစ်ချပြီး အစီရင်ခံစာပါ D.S.A (8, 13, 14) ကျောင်းဆင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်တွေကို တိုင်းမှူးမပေးတော့ဘဲ နယ်ဘက်ဝန်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီးများအဖြစ် ရွှေ့ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဖြစ်စဉ်တွေအရ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးဟာ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကို လျော့မတွက်ရဲတော့ဘဲ ကျောသပ်ကာ ကိုနေဝင်းလေး အဘိုးကြီး အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်ပြောနော်လို့ ညှိယူရတဲ့ အခြေအနေ ရောက်လာတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာ အဘိုးကြီး အရှိန်အဝါနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ဖြင့် ပုခုံးပေါ် အပွင့်တင်လိုက်တာမို့ ထောက်လှမ်းရေးက D.S.A (13) ကျောင်းဆင်း ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးမှ တပ်မမှူးမဖြစ်ဘဲနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရာထူး အဆင့်ဖြစ်တာကို မကျေမနပ် ပြောဆို ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုနေဝင်းဟာ အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်သူဖြစ်ပြီး မာန်မာနမရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဇနီးကလည်း ပုသိမ်သူ ကျောင်းဆရာမဖြစ်ပြီး အဘိုးကြီး ဦးသန်းရွှေ နတခတိုင်းမှူး ဖြစ်စဉ်တုန်းက ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်အား အနီးကပ် ပြုစုလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကို မှော်ဘီမှာတစ်ကြိမ် ထပ်မံတွေ့ဆုံစဉ် သူ့အနေနဲ့ တပ်မှာမလုပ်ချင်တော့ကြောင်း ငြီးတွားပြောရှာပါတယ်။ အဘိုးကြီးက ခွင့်မပြုသေးဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ တပ်ကထွက်ရင် မှော်ဘီမှာ မြေကွက်ဝယ်ထားပြီး စိုက်ပျိုးရေးသာ လုပ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူဟာ မှော်ဘီတခွင်မှာ နေရာလွတ် မြေပိုတွေရှိနေလို့ မရှိဆင်းရဲသား ကလေးတွေအတွက် ကျောင်းဆောက်ပေးတဲ့အပြင် မြေကွက်ပါ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ သူက အဘိုးကြီးကို ခေါ်ပြကြည့်ဦးမယ်လို့ ပြောတော့ ကျွန်တော်က ကျောင်းဆောက်လက်စ ဘာမှ မပြီးသေးတာမို့ ပြလို့ ဖြစ်ပါမလားလို့ ပြောလုိုက်ပါတယ်။ သူဟာ အဘိုးကြီးဦးသန်းရွှေကို ဘယ်လောက် ပိုင်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ဖြစ်စဉ် ကျွန်တော် ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သူက အဘိုးကြီးကိုပြရင်းနဲ့ နောက်မှာ ပါလာမဲ့ ဝန်ကြီး၊ ဝန်လေးတွေဆီက ဘိလပ်မြေ၊ အုတ်၊ သွပ်၊ မီတာ၊ အဝီစိရေတွင်း စတာတွေ တောင်းမလို့ကွလို့ ဆိုပါတယ်။ ငါက ကိုယ်ကျိုးအတွက် တောင်းတာ မဟုတ်ပေမယ့် စစ်ရုံးမှာ အလွတ်ပါးစပ်နဲ့ တောင်းရရင် သိက္ခာထိတယ်။ အရှိအတိုင်း လက်တွေ့ပြပြီးမှ တောင်းလို့ ကောင်းတာပေါ့လို့ ပြောပါတယ်။
များမကြာမီမှာပင် တပ်ချုပ်ဦးသန်းရွှေခမျာ တပည့်ကျော် ကိုနေဝင်း ပင့်ရာ မှော်ဘီ စာသင်ကျောင်းရှိရာသို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်ရှိလာရပါတော့တယ်။ အဘိုးကြီးလည်း ဗွက်တောထနေတဲ့ အုတ်ခဲကျိုး ခပ်ကျဲကျဲ စီထားသော ခြေနင်းစရာ နေရာလေးတွေကို ခွကျော် လိုက်ကြည့်ပြီး နောက်ကပါလာတဲ့ ဝန်ကြီးတွေကို မင်းတို့ နေဝင်းလိုတာ လုပ်ပေးလိုက်ဆိုပြီး မိန့်မှာကြောင်း သိရပါတော့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုနေဝင်းဟာ အနားယူ တပ်က ထွက်ချင်လွန်းလုိ့ ခလရ (၉၁) မှာ အတူနေခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့တပ်စုမှူးဖြစ်သူ ဗိုလ်ကြီးစိုးရှိန် (ယခုဗိုလ်မှူးချုပ်) ကို လက်ထပ် သင်ကြားပေးခဲ့ကာ အဘိုးကြီးနားသို့ခေါ်ယူ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ သိရှိပါတယ်။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ ခင်ဗျား…. ဦးသန်းရွှေနဲ့ သူ့အနီးကပ် တပည့်များအကြောင်း အပိုင်း (၃) ကို စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.photayokeking.org မှ အခါအားလျော်စွာ ဆက်လက် တင်ပြပေးသွားပါမယ်။